မျက်နှာလေး အမွေးအမျှင် ကင်းစင်လှပဖို့ရာ နည်းအဖြာဖြာ - Hello Sayarwon
“နှုတ်ခမ်းမွေးလေးရေးတေးတေးနဲ့မှ လှတဲ့ ခေတ်ကုန်သွားပါပြီ” ဆိုတဲ့ မေလေးတို့ရေ…။ တချို့ မေလေး တွေဟာ အမျိုးသားဟော်မုန်းဓာတ်အားကောင်းတာကြောင့် မျက်နှာလေး မှာ အမွေးအမျှင်ပေါက်တာ များတတ်ပါတယ်။
မျက်ခုံးကောင်းတာလေး ကို သဘောကျပေမယ့် နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေပါထွက်နေရင်တော့ ဘယ်လိုပဲ ခပ်ပါးပါးလေး ထွက်တာပါဆိုဆို စိတ်ထဲမှာ ဘဝင်မကျတတ်ကျဘူးမဟုတ်လား။ ဒီတော့ သည် အမွေးအမျှင်တွေကို ရရာနည်းတွေနဲ့ ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်….။
အဲဒီမှာ မေလေးတို့ အများဆုံးလုပ်ကြတာက ရိတ်ပစ်တာပါ။ လွယ်တာကိုး …နော်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းဟာ မျက်နှာ အတွက်သာမက တခြားနေရာ အတွက်ပါ မရွေးချယ်သင့်ဆုံး နည်းပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ရိတ်တယ်ဆိုတာ အောက်က hair sac လို့ခေါ်တဲ့ အမြစ်မပါပဲ အပေါ်ယံပဲ ဖြစ်တဲ့ အပြင် သွားဆွ လိုက်သလို ဖြစ်တာကြောင့် အမွေးပေါက်တာ ပိုသန်မြန်စေပါတယ်တဲ့။
ခဏခဏ ရိတ်ရင် နှုတ်ခမ်းမွေးပိုမည်း၊ ပိုထူလာတတ်တာပေါ့ ။ ဒါ့အပြင် micro abrasions လို့ခေါ်တဲ့ ပွန်းပဲ့ရာအသေးလေးတွေ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနေတဆင့် ပိုးဝင်နိုင်လို့ မွေးကျွတ်နာလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေကတော့ shaving cream တွေ aftershave တွေ သေချာသုံးပြီး ရိတ်ကြတာများတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့… သူတို့က ခဏခဏ ရိတ်လို့ ပိုသန်လာလည်း ပြဿနာမရှိပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကျတော့ ရိတ်ထားတဲ့ အရာ အကြောင်းလိုက်ကြီး မျက်နှာမှာ ထင်နေတာမျိုးဆိုတော့ အလှပျက်တာပေါ့လေ။
တချို့မေလေးတွေကလည်း မိတ်ကပ်လိမ်းရင် ညက်အောင်ဆိုပြီး ပါးပေါ်က အမွေးနုတွေကိုပါ ရိတ်ပစ်တတ်ကြတော့ အဲ့နေရာမှာပါ ပိုးဝင်ရင် ဝက်ခြံထွက်တာ…မွေးညှင်းပေါက် ရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
မရိတ်ဘဲ မွေးကျွတ် ခရင်မ် လိမ်းတာတို့ မွေးညင်းအရောင်ချွတ်တာ တို့ဆိုတာလည်း မျက်နှာ အတွက် မရွေးသင့်တဲ့ နည်းတွေပါပဲ။ သည်ဆေးတွေမှာက အရေပြားကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ chemical အနည်းနဲ့ အများပါပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်လို့ မျက်နှာမှာ အကွက်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ မေလေးတွေကို လည်း မြင်ဖူးပါတယ်။
ဒါဆို ဖယောင်းနဲ့ခွာမယ် ဆိုပြီး waxing ကို ရွေးကြတယ်။ ဒီနည်းက တချို့ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ လုပ်လို့ရနိုင်သလို စျေးကွက်ထဲက အဆင်သင့်ရောင်းတဲ့ waxing gel လေးတွေဝယ်ပြီး အိမ်မှာလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
သူ့အားသာချက်က အမွေးပြန်ပေါက်တာ နှေးမယ်…. Hair sac ပါ ထွက်သွားတာမို့ ရိတ်ထားသလို အကြောင်းလိုက်မပေါ်ဘဲ သဘာဝကျနေစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ waxing ဟာ မျက်နှာပေါ်က မွေးညှင်းပေါက်တွေကို ကျယ်သွားစေတဲ့ အတွက် အဆီပြန်တာ နဲ့ ဝက်ခြံထွက်တာတွေကို အားပေးတဲ့ အပြင် အသားအရေ တင်းရင်းလှပမှုကို လည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါသေးတယ်။ ခြေမွေး လက်မွေး တွေ အတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် မျက်နှာအတွက်တော့ နည်းလမ်းကောင်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူးတဲ့ မေလေးတို့ရေ။
ဒါကြောင့် အခု လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ သဘာဝနည်းလေးတွေသုံးပြီး မျက်နှာပေါ်က အမွေးအမျှင်တွေ ကို ဘယ်လို လျော့ပါးသက်သာအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ နှင်းက ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။
ပထမနည်းလေးက နှင်းကိုယ်တိုင် လည်း သုံးနေတဲ့ နည်းလေးပါ။ နှင်းအသက် ၈ နှစ်လောက်ထဲက နှုတ်ခမ်းမွေးရေးရေး ရှိပါတယ်။ ဟိုလူစ ဒီလူစနဲ့ မိန်းကလေးဆိုတော့ ရှက်လို့ ဆိုပြီး ဖေဖေ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားယူပြီး ရိတ်ပစ်လိုက်တာ နောက်တော့ အမွေးကြမ်းကြမ်းလေးတွေထွက်ပြီး ပိုမည်းပိုရှည် လာတော့တာပါပဲ။
အဲဒါနဲ့ မေမေက ကုလားပဲအကျက်မုန့် တစ်ဇွန်းထဲကို ပျားရည် လေးငါးခြောက်စက်ရောပြီး ပျစ်ပျစ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ် … ပြီးရင် အဲ့ဒီ့ အနှစ်ကလေးကို နှုတ်ခမ်းမွေးပေါက်တဲ့ လိုင်းတစ်လျှောက် ထူထူကလေးလိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ထားရတာပါ။ ခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ မွေးပွ လက်ကိုင်ပုဝါသန့်သန့်လေးကို ရေနွေး ဆွတ်ပြီး အသာအယာ ပွတ်ဆေးရတာပါပဲ။
၁ပတ်ကို ၂-၃ ခါ လောက်လုပ်ပေးရင်း အမွေးတွေ တဖြည်းဖြည်းပါးလိုက်သွားပြီး မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ နှင်းကတော့ ဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားခဲ့တာပါ။
တခြား နည်းကတော့ နနွင်းတစ်ဆ နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှစ်ဆ ရောပြီး ရေနွေးလေး နည်းနည်းနဲ့ ပျစ်ပျစ်ကလေးဖျော်ပြီး နှုတ်ခမ်းမွေးနေရာကို ခပ်ဖွဖွ ပွတ်ရတာပါ။ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးက အမွေးနုတွေကို ဖယ်ချင်တာဆိုရင်တော့ ဒိန်ချဉ် တစ်ဇွန်း၊၊ သကြားအပွင့်ကြီး ဇွန်းဝက်၊ သံပုရာရည် ဇွန်းဝက် နဲ့ အလှဆီ ( မရလည်း သံလွင်ဆီ သုံးနိုင်) ဇွန်းဝက် ကို ဖန်ပန်းကန်လုံး ထဲမှာ သမအောင်မွေပါ။
သကြား မပျော့်တပျော် အခြေအနေ ရောက်ပြီဆိုရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ brush အပြား အသန့် ( မရှိရင် ဆေးသုတ် တဲ့ brush အသေး ဆိုလည်းရပါတယ်…သန့်တော့သန့်ပါစေ) နဲ့ မျက်နှာပေါ်က အမွေးလေးတွေ ပေါက်နေတဲ့ လားရာ အတိုင်း ဖိ ဆွဲချ ပြီး လိမ်းပေးပါ။
၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီးရင်တော့ ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးလို့ရပါပြီတဲ့။ နှင်းပြောထားတဲ့နည်းလေးတွေကို ၁ ပတ်မှာ ၂-၃ ကြိမ်လောင်လုပ်ပေးရင် ၂ လလောက်ဆိုသိသာလာပါတယ်။သဘာဝနည်းလေးတွေ ဖြစ်တာမို့ အသားအရေအတွက် အန္တရာယ်လည်းကင်းသလို ထိရောက်မှုလည်း ရှိပါတယ်…. မေလေးတို့ ဇွဲရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။
အမွေးအမျှင်တွေကို ထာဝရကွယ်ပျောက်ချင်ပါပြီ ဆိုတဲ့ မေလေးတို့ အတွက် laser treatment အကြောင်းကိုလည်း နှင်း နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လေး ပြောပြပေးမှာမို့ စောင့်ဖတ်ကြပါဦးနော်။ အလှပေါ် အယဉ်ဆင့် နိုင်ကြပါစေ မေလေးတို့ရေ။
အကုန်အကျမများဘဲ အိမ်မှာ waxing လုပ်ကြမယ်